Vatsy zaraina eny amin’ny fokontany Avela ho faty noana izany izay tsy nahaloa adidy ?
Fananan-tany Tsy andoavam-bola ny fikarakarana taratasy famindram-pananana
Fanohanana ireo vehivavy sembana Mifanome tanana ny Inner Wheel sy ny CUA
Herisetra mianjady amin’ny vehivavy Fitarainana 1.437 no voaray tao anatin’ny roa volana
Rano fisotro madio Hidina ho 20 Ar ny bidon 20 litatra
Mbola vao ny 35 %-n’ny mponina eto amintsika no misitraka rano fisoro madio raha betsaka. Ho an’ny mponin’Antananarivo renivohitra manokana dia mbola maro no tsy mañana izany ao an-tokantranony fa milaha-drano eny amin’ny paompy.
Tsy fanjarian-tsakafo any Atsimo Nanome 6 tapitrisa dolara ny Koreanina
Nanome fanampiana mitentina 6 tapitrisa dolara hoenti-mitsinjo ara-tsakafo ny mponina miisa 51 000 any kaominina Itampolo sy Fotadrevo Distrikan’Ampanihy ny Repoblika Koreanina Tatsimo amin’ny alalan’ny Sampan-draharaha Koreanina momba ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena na ny KOICA.
Misedra fahasahirana goavana indrindra noho izay niainany rehetra hatramin’izay ankehitriny ny vahoaka malagasy.
Na dia miantso firaisankina sy fifanomezan-tanana isan-kariva aza ny filoham-pirenena sy ny ankamaroan’ireo mpitondra ary tomponandraikitra samihafa dia hita ho zary kolontsaina raiki-tapisaka anatin’ireo malagasy mahazo fahefana hatreny ifotony ity resaka fanaparam-pahefana sy ny manodidina izay ity. Tsy vitsy ireo fokontany ahitana izany ankehitriny, raha tsy hiresaka afa-tsy ny eto an-drenivohitra. Isan’ny mitaraina manoloana izany, ohatra, ireo mpivaro-kena sasany etsy Besarety, izay milaza fa amin’ny 11 ora maraina dia efa mihadihaody ireo tomponandraikitra eny amin’ny fokontany mandrisika azy ireo hanidy tsena. Miafara amin’ny fikasihan-tanana mihitsy aza izany, raha ny fitarainan’izy ireo hatrany. Any amin’ny fokontany sasany moa, toa izay hita teny Amboditsiry, dia feran’ny tomponandraikitry ny fokontany ho ireo nahavita adidy tamin’ny taon-dasa ihany no hampisitrahana ny fanampiana tokony ho azony ao anatin’ny fiatrehana izao Covid 19 izao.